Maareynta mashruuca: oo ka mid ah caqabadaha in injineerka madaniga uusan ka baran fasalka - Geofumadas
Maareynta mashaariicda: ka mid ah caqabadaha ah in injineerka madaniga uusan ka baran fasalka
Sebtember, 2018 Engineering
Marka la dhammeeyo xirfadda iyo qalinjabinta injineerka, dhammaystirka mid ka mid ah ujeedooyinka arday kasta oo dejiya marka ay bilaabaan waxbarashadooda jaamacadeed ayaa la isku darayaa. Xitaa ka sii muhiimsan haddii xirfad-qaadidu ay tahay meesha ay ka mid tahay dareenka. injineernimada Civil waa xirfad in qaadeysaa sanad walba kumanaan arday in ay isku qoraan jaamacadood ee rajada ah in ka dib markii waxbarashadooda yeelan doontaa beerta balaadhan oo ah shaqo, taas oo si ay u horumariyaan xirfadahooda gaarka ah iyo xirfadeed, oo waxay qariyeen by waxbarasho, maamulka mashruuca, dhismaha iyo maamulka dhismaha ee meelahan soo socda: caafimaadka (beeblayne, dhirta daaweyn wasakhda, wasakhda, maareynta qashinka adkaha ah, iwm), waddooyinka (jidadka, waddooyinka, buundooyinka, garoomada diyaaradaha, iwm), hydro (biyo-xireenno, berkadood, ilo, kanaalada, iwm) iyo dhismaha (urbanisms, guryaha, dhismayaasha, derbiyada, sugnan, iwm).
Management of mashaariicda dhismaha waa mid ka mid ah nidaamo ah in maalin walba soo jiidata injineerada more rayidka ah si ay u galaan duurka this xirfadeed, iyo kuwa ku dhici kara si ay u maareeyaan mashaariic ku ceebownaaye, aakhirka qaba cawaaqibka iyo ogaaday in fasalka jaamacadda Dhammaan aqoonta lagama maarmaanka ah ayaa la siiyaa si ay u wajahdo caqabad ku saabsan sidan weyn.
Si aad ugu guulaysato maareynta mashruuca dhismaha, waa in aad leedahay aqoon ballaaran oo ku saabsan mihnado kala duwan ee aqoonta iyo waayo-aragnimo badan oo khibrad ah, laakiin xirfado dheeraad ah ayaa loo baahan yahay kuwaas oo aan ka baran fasalka, iyada oo sirta shucuureed iyo horumarinta xiriirka dadka dhexdooda.
Mashruucu waa dadaal qorshaysan oo ku meelgaar ah oo gaar ah, oo loo sameeyey si loo abuuro badeeco gaar ah ama adeegyo ah oo lagu daro qiime ama keeno isbeddel faa'iido leh. Dhammaan mashaariicda way ka duwan yihiin, mid walbana wuxuu soo bandhigaa xaalado iyo caqabado u baahan khibrad iyo sirdoon si loo ogaado sida loo xaliyo habka ugu wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, qof kasta oo ka bilawda maareynta mashruuca wuxuu leeyahay marxaladoodii ugu horeysay ee ay qabtaan, halkaan waxaan isku dayi doonaa inaan ku tusino talooyin ku saabsan sidaad ugu maareyn laheyd sida ugu wanaagsan.
Talada ugu wanaagsan ee aan ku siin karaan injineerada rayidka ah, kuwaas oo u malaynayaa in Koox kastaha qaar xirfadeed ee degaanka nolosha maamulka mashruuca, kaas oo ay bilaabaan inay si degdeg ah ka dib markii qalin-jabinta si qoto ay aqoon degaanka iyo habka ugu wanaagsan ee sameynayo shahaadada Masterka ee, shahaadada jaamacadeed ama qaadato koorsooyin takhasus ah mawduucaan. Machadka Project Management (enshuuranskiisa), urur aan faa'iido doon ahayn oo ka mid ah ururrada xirfadeed ee dunida ugu weyn, iyadoo nus milyan xubnaha shahaado ee maamulka mashruuca ee ka sii badan waddammada 150, waa ikhtiyaarka ugu muhiimsan si ay u bilaabaan barashada ee jihada mashaariicda iyada oo loo marayo jaangooyooyinka iyo shahaadooyinka, caalamka oo dhan loo aqoonsaday, iyo in dunida oo dhan laga dhigo iyada oo loo marayo bulsho wada shaqeyn ah. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shahaadooyinka PMI bogooda: www.pmi.org. Doorashooyinka kale ee adduunka oo dhan ayaa dib loo eegi karaa bogga internetka: www.master-maestrias.com. Halka 44 ay muujinayso fursadaha macaamiisha ee maareynta mashruuca, wadamo kala duwan. Qaar ka mid ah koorsooyinkan si dhakhso ah ayaa loo qaadi karaa iyo sida caadiga ah, sida kiiska Koorsada Mashruuca Maareynta Mashruuca (PMP).
Si aad u wajahdo mashruucan koowaad, oo sida caadiga ah waa inuu ahaadaa mid yar, waxaan ku talineynaa in aan tixgelinno dhinacyada soo socda:
Dib-u-eegis, daraasad iyo baadhitaan si fiican iyo si faahfaahsan oo ku saabsan mashruuca, waxaad tahay maamulaha mas'uulka ah waana inuu sameeyaa go'aamada farsamada muhiimka ah inta lagu jiro maamulka oo idil. Dhamaadka marxaladani waa inaad taqaanid habka dhismaha oo dhan iyo baaxadda marka la eego kharashka, waqtiga iyo tayada loo baahan yahay si loo buuxiyo si buuxda.
Diyaarso ujeedooyinkaaga iyo hadafyadaada. Maxaa laga filayaa mashruuca? Maxaa laga filayaa maamulkaaga? Waa maxay faa'iidooyinka shirkadda?
Waqti badan oo aad ku qaadato bilawga mashruuca si aad u qorsheyso sida arrimuhu u socdaan, weydii fikradaha kooxdaada shaqada si loo dhiso dhismaha baaxadda, jadwalka, miisaaniyadda iyo aqoonsiga khatarta.
Baro kooxda, u dhageyso baahidooda. Dadka si farxad leh u shaqeeya, waxay ka faa'iideysan doonaan awooddooda buuxda si ay u qabtaan shaqadooda iyo suurtagalnimada.
Ka qaybgal kooxdaada. Ilaa xad ay dadku dareemaan in ay mashruucan ku qeexeen, waxay yeelan doonaan wax soo saar wanaagsan.
Maaree mashruuca. Qeexaan shirarka xiga ee socota, halkaas oo aad xakamayso fulinta hawlaha, kharashka miisaaniyadda, dadka, khatarta iyo wixii dhib ah ee soo bixi kara.
Ka dhig qaybaha xiisaha leh. Daneeye saameyn leh oo aan loo sheegin waqtigii loogu talagalay waxay samayn kartaa go'aano aan ku habbooneyn maamulkooda, waxaa muhiim ah in la sii wacyigeliyo oo lagu qanco.
Haddii dhibaatooyinku soo baxaan ama haddii mashruucaagu aanu kulmin ujeedooyin muhiim ah, ha quusan. Aad ayey muhiim u tahay sida aad u xallisid xaaladaha. Dib u eeg dhibaatada, u adeegso tallaabooyinka saxda ah ee saxda ah, maamulida isbeddelada lagama maarmaanka ah ee qorshayaasha, u sheeg dhinacyada xiisaha leh ee ku saabsan xaaladda iyo in ay la wareegaan maamulka.
Maareynta Mashruuca waxaa lagu qeexi karaa anshaxa habeynta iyo maareynta kheyraadka, si la mid ah mashruucan si dhammeystiran u dhammaystirnaanta baaxadda, waqtiga iyo kharashyada la soo jeediyey ee bilowga hore. Sidaa darteed, waxay ku lug leedahay fulinta hawlo taxane ah oo isticmaala kheyraadka sida waqtiga, lacagta, dadka, qalabka, tamarta, isgaadhsiinta (iyo kuwa kale) si loo gaaro himilooyin horay loo qeexay.
Iyadoo lagu saleynayo qeexitaanka macnaha maareynta mashruuca, maaddooyinka lagama maarmaanka ah ee aqoonta leh in maamulaha wanaagsan uu haysto si uu si wax ku ool ah u fuliyo shaqadooda ayaa loo qeexay loona dhisay, waana:
Isdhexgalka iyo baaxadda mashruuca: aaggan waxaa lagu soo koobay labo erey: hadaf iyo aragti. Maamulaha mashruuca waa in uu caddeeyaa baaxadda mashruuca marka la eego shuruudaha iyo waqtiyada iyo, ka sarreeya, marka la eego saameynta. Tan waxaa ka mid ah horumarinta iyo fulinta qorshaha iyo xakameynta isbedelada. Tani waa inaad ogtahay dhinacyada farsamooyinka ah ee farsamada ah iyo kuwa wax dhisaya si ay u fuliyaan shaqada.
Qiyaasidda wakhtiyada iyo waqtiyada kama dambaysta ah: Awooddani waxay ku lug leedahay diyaarinta jadwalka hawlaha la qorsheeyey, muddadii fulinta iyo khayraadka loo heli karo mid kasta. Maamulaha mashruuca waa inuu awood u leeyahay in uu ku shaqeeyo barnaamijyada iyo codsiyada loo isticmaalo horumarinta jadwalka shaqada, tusaale ahaan mashruuca Microsoft, Primavera, iwm.
Maaraynta Kharashka: Maamulaha mashruuca wanaagsan waa inuu maareynayaa kharashyada gaarka ah iyo guud ahaan shaqada hore ee qorshaha khayraadka (labadaba aadanaha, qalab, qalab iyo farsamoyaqaan).
Maareynta tayada: waa hawlaha lagama maarmaanka u ah fulinta tallaabooyinka u oggolaanaya qiimeeynta tayada alaabooyinka, adeegyada ama waxyaabaha iyo ciribtirka dhammaan caqabadaha hortaagan in la gaaro heerar sare oo qanacsan. Si loo fuliyo karti-xirfadeedkan, maamuluhu waa inuu yaqaanaa xeerarka farsamada iyo tayada ee khuseeya jawiga dhismaha.
Maaraynta khayraadka dadka: tan waxa ka mid ah shaqaaleynta shaqaale tayo sare leh, qiimeynta waxqabadkooda iyo maareynta dhiirigelinta; iyada oo fikradda ah in la gaaro go'aamada kordhiya heerka waxsoosaarkooda iyo ballanqaadka kuwa ku lugta leh mashruuca.
Maareynta Xiriirka: Maamulaha mashruuca ayaa sidoo kale waa inuu horumariyo xiriirka iyo qorshaha wada xiriirka kaas oo u habaynaya baahiyaha kiis kasta. Qorshaha Said waa inuu asal ahaan ka fikiraa qaybinta macluumaadka, dheecaankiisa iyo soo bandhigida xaaladda xaaladda marxalad kasta ee mashruuca, laga bilaabo marka ugu horeysa ilaa dhalashada ugu dambeysa.
Maareyn Halis: Tani waxay meesha aqoonta uu leeyahay inuu sameeyo leh aqoonsashada Khataraha ku hor gudban laga yaabaa in kooxda marxalad kasta oo ka mid ah hirgelinta, iyo maaraynta khatarahaas, sidoo kale loo yareeyo saamaynta ay ama beddelaaya saamaynta ay.
Maaraynta mashruuca gaaban waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee injineerka madaniga ah la kulmay inta lagu jiro noloshiisa xirfaddiisa, taas oo aan si buuxda loogu diyaarsanayn fasalada, sidaa daraadeed xirfad kasta oo wanaagsan oo go'aanka iska leh Anshaxkan, waa inaad go'aan ka gaartaa inaad isku diyaariso naftaada mid kasta oo ka mid ah meelaha aqoonta loo baahan yahay si aad u noqotid maamulaha mashruuca.
Post Previous«Previous Sida ugu fiican ee software loogu talagalay dhismaha - Abaalmarinta Shirkada dhismaha 2018
Post Next 14as International gvSIG Shirka: «Dhaqaalaha iyo Waxsoosaarka»Next »